Trano - Fiompiana Hinds Feet
Mifandraisa aminay: 704-992-1424 (Huntersville) na 828-274-0570 (Asheville)
Tantara: Tantaran'i Puddin
Fandaharana momba ny fonenana
Ny toeran'i Puddin
Programa mitaingina fitsaboana
Mamaha ny ratra amin'ny ati-doha
Programa andro virtoaly
Fomba handraisana anjara
Mpiasa an-tsitrapo sy Intern
EKEY AMIN'IZAO TONTOLO IZAO
HO AN'NY PROGRAMA ANDRO VIRTUAL Ampiharo Eto!
Natokana ho an'ny olona miaina amin'ny ratra amin'ny atidoha.
Ny iraka ataonay dia ny hampitombo ny mety ho voka-dratsin'ny olona voan'ny ratra amin'ny ati-doha miaraka amin'ny programa mitambatra, tsy manam-paharoa ary holistic; mamela ny mpikambanantsika hanao hetsika manan-danja sady mampivelatra ny fahatsapana ny maha-izy azy ao an-tokantrano sy eo amin'ny fiaraha-monina manodidina. Hanatontosa ity iraka ity isika amin'ny alalan'ny programa miavaka, mifantoka amin'ny olona, ​​aorian'ny fanarenana, mifototra amin'ny fiaraha-monina.
Jereo ny tatitra isan-taona 2021
Fandaharana andro sy trano fonenana
Ny fandaharan'asan'ny Hinds' Feet Farm sy ny trano fonenana dia fiovan'ny paradigma avy amin'ny modely fitsaboana nentim-paharazana ho an'ny olona miaina amin'ny ratra amin'ny ati-doha mankany amin'ny maodely izay mandray ny fomba fiasa ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana manontolo, manome hery ny mpikambana amin'ny asa sy ny dikany amin'ny fiainana aorian'ny ratra. Noforonin'ny, ary ho an'ireo olona miaina miaraka amin'ny ratra amin'ny atidoha dia mandray anjara mavitrika amin'ny fotodrafitrasa manontolon'ny fandaharana.
ny Fandaharana andro dia mifantoka amin'ny fanampiana ny mpikambana tsirairay hahita ny "ara-dalàna vaovao" amin'ny alàlan'ny fandaharana mavitrika eny an-toerana sy mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina mifantoka amin'ny hetsika ara-tsaina, famoronana, fihetseham-po, ara-batana, sosialy ary mialoha ny asa. Ny fandaharam-potoanantsika dia hita ao amin'ny roa tonta Huntersville ary Asheville, Caroline Avaratra.
Ny toeran'i Puddin dia trano fitaizana fianakaviana manara-penitra 6 fandriana ho an'ny olon-dehibe voan'ny ratram-po na tratry ny atidoha. Ity trano ity dia natao ho an'ny mpiasa mba hikarakarana ny filan'ny olona izay mila fanampiana antonony ka hatramin'ny ambony indrindra amin'ny asa ataony andavanandro (ADLs). Ao amin'ny toeram-pianaranay Huntersville no misy ny Puddin's Place.
Hart Cottage dia trano fonenana misy fandriana 3 natao hanomezana fahafaham-po ny filan'ny olon-dehibe voan'ny ratra amin'ny ati-doha izay mahaleo tena amin'ny asa rehetra atao amin'ny fiainana andavanandro (ADLs), nefa mila fanampiana sy fanaraha-maso malefaka ka hatramin'ny antonony mba hamitana ny asa ary hijanona ho voaro. Hart Cottage dia hita ao amin'ny campus Huntersville.
Ny mpikambana ao amin'ny programa momba ny trano fonenana dia ampirisihina handray anjara, hifanerasera ary handray anjara amin'ny hetsika mitohy amin'ny fandaharam-potoana isan'andro.
Ilaina ny fanampianao
Mampiavaka ny tontolo iray ny fanomezana tokana.
Ny fanohananao isam-bolana dia hanampy anay hanohy hanome fandaharana miavaka sy manavao ho an'ny olon-dehibe maratra amin'ny atidoha sy ny fianakaviany.
Tsindrio ETO raha te hianatra ny fomba hanohanana ny toeram-pambolena Hinds' Feet!
Misy fiantraikany amin'ny fiainana
"Raha vao naratra aho, dia nitsambikina tany amin'ny toeram-pitsaboana samihafa aho. Tezitra tamin'izao tontolo izao aho ary te hody fotsiny. Farany, tsy maintsy manaiky ny ratra sy ny tolonao ianao. Nianatra faharetana tamin'ny olona manodidina ahy aho ary ny tenako."
"Tsy afaka manao ny zavatra azoko taloha aho, fa mitady lalana sy trano fonenana vaovao ahafahana manao ireo zavatra ireo"
"Nahazo namana maro aho tao amin'ny toeram-piompiana. Ny mpandray anjara hafa dia sariaka daholo, ary mahafinaritra ahy ny miaraka amin'izy ireo.. Tiako koa ny mifandray amin'ny mpiasa. Tena mahafinaritra izahay miaraka."
"Tsy afaka manao izany irery aho, fa izaho irery ihany no afaka manao izany. Ary ny manodidina ny olona toa ahy dia nampianatra ahy hanana faharetana hanokatra ny masoko ary hahita ny hafa amin'ny hazavana hafa."
"Nandray anjara tamin'ny fiainako tamin'ny fomba lehibe tokoa ny fandaharan'asan'ny andro. Nomeny fahalalahana ampy aho hanao sy hianatra amin'ny fahadisoako."
"Ny fomba amam-panao maha-olombelona amin'ny fananganana fifanajana, fahatokisana ary fifanajana amin'ny mpikambana sy ny mpiasa ary ny ray aman-dreny dia mamirapiratra isaky ny mitsidika izahay."
"Nitombo be izy tato anatin'ny taona vitsivitsy tamin'ny fomba maro. Manana vondrom-piarahamonina ao amin'ny Hinds Feet Farm misy namana sy traikefa izay manampy azy hivoatra sy hitombo ary hanana fiainana sambatra izy."
Get ny farany
Hihaona aminay Huntersville Intern, Maggie!
Enga anie 1, 2022
Hihaona aminay Asheville Intern, Alex!
Aprily 1, 2022
Hihaona aminay Allied Health Intern, Natalia!
Hihaona aminay Huntersville Day Program Intern, Lauren!
MIAMBARA AMIN'NY Lisitry ny EMAIL!
Copyright © 2020 Hinds Feet Farm. Zo rehetra voatokana. Design by Fahasamihafana noforonina.
Hinds' Feet Farm dia fikambanana tsy mitady tombony 501 (c) 3.